FANAKATONANA ORINASA MIISA 400 : Mikaikaika sy miantso vonjy ireo olona very asa
Amin’izao ankatoky ny fetin’ny faran’ny taona izao dia miantso vonjy sy mikaikaika mafy ireo olona rehetra very asa tamin’ny fanakatonana orinasa izay nataon’ny minisiteran’ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina tamin’ny 21 Novambra lasa teo iny. 26 novembre 2018
Orinasa miisa 400 be izao mantsy no indray nakatona tamin’ izany.
Voalaza fa noho ny tsy fanarahan-dalàna sy tsy fahafenoana fepetra no antony nandraisan’ny minisitry ny indostria Guy Rivo Randria-narisoa izany fepetra mambotry ny mpiasa malagasy izao. Mampiahiahy ihany ity toe-javatra ity satria vao tsy ela akory izay ary nifanindry an-dalana tamin’io fanakatonana orinasa io mihitsy aza ny fankalazana ny andro Afrikanina ho an’ny fananganana orinasa. “Ny andro Afrikanina ho an’ny fananganana orinasa ankalazaina nefa ny orinasa malagasy potehina sy akatona”, hoy ireo very asa naneho ny tsy fankasitrahany ity fihetsika mampiahiahy nataon’ny minisitry ny indostria ity.
Mampametra-panontaniana ny maro ity fihetsika nasehon’ i Guy Rivo Randrianarisoa ity. Dia sanatria ve ka manao “tsipaky ny miala aina” sy manampatra ny fahefana kely nomena azy sahady Andriamatoa minisitra izay olona akaiky an’ingahy Ravalomanana Marc, ka hanohy ny famotehana ny orinasa malagasy tahaka izay nataon’ity filoha teo aloha fony izy teo amin’ny fitondrana ny firenena ? Raha izany mantsy ny zava-misy dia mazava fa “Mpandrava sy mpamotika” tokoa ireto olona akaiky ny mpanorina ny orinasa Magro sy Tiko ireto. Ny fety miha manatona anefa tsy mba misy indrafo sy fitadiavana marimaritra iraisana hitsinjovana ireo mpiasa malagasy misehatra amin’ireo orinasa an-jatony ireo. Tsy mahazaka fifaninanana fa manao bontolo sy mamotika hatrany ary te-hanjaka tokana hatrany.